Xiaomi, oo ah astaantaas ku guuleysata Isbaanishka oo si xun ugu fashilantay adduunka koowaad | Wararka IPhone
Xiaomi, sumaddaas oo ku guuleysata Isbaanishka oo si xun ugu fashilantay adduunka koowaad
Xiaomi wax badan ayey ka hadashaa, Aniga qudhayduna, aniga oo aan ku dhawaaqin Fankeyga sababo jira awgood, waa inaan dhahaa waxaan bartay inaan ku qanco shaqada ay shirkada Shiinaha ka qabto wax soo saarkooda, hagaajinta qiimaha iyo soo bandhigida waxqabad ay adagtahay in lala jaanqaado tartanka, taas oo ah lama huraan waxay horseed u tahay wicitaanka "Dimuqraadiyeynta" tiknoolajiyadda.
Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ayaa ka duwan inta imisa "warbaahin" Isbaanish ah iyo YouTubers ay rinjiyeeyaan. Xiaomi waa shirkad si xun ugu fashilantay waddammada adduunka ugu horreeya, iyo taasi xitaa kuma haysato "xaalad" wanaagsan Shiinaha, markaa ... maxaa had iyo jeer loogu buunbuuniyaa Xiaomi? Nala baro natiijooyinka iibka shirkadda Aasiya ee waddammada adduunka ugu horreeya.
1 Xiaomi iyo wadarta guuldaradeeda suuqa saamiyada
2 Isbarbardhiga sare ee wadamada kale ee adduunka ugu horreeya
3 Marka ... xaggee Xiaomi runtii ku guuleysataa?
4 Haddana si muuqata ayey u qurxiyaan
Xiaomi iyo wadarta guuldaradeeda suuqa saamiyada
Tusaale waa xogta uu bixiyay Javier Sanz, agaasimaha Bagzone, iyo milkiilaha kooxda ADSLZone. Shirkada Shiinaha ayaa lumisay 50% qiimaheeda tan iyo markii ay shaacisay. Sababaha ayaa umuuqda kuwo cad, kalsooni darada suuqyada ee shirkad umuuqata inay sare uqaadeen MiFans iyo habab farsamo gaar ah, eray afka ah oo qarinaya xaqiiqda gadaal, waana xaqiiqda ah in maalgashadayaashu aaminsanyihiin in Xiaomi uusan iibin inta Waxay umuuqataa inay iibineyso, mana ahan mid faa iido badan sida aan u maleyn karno. Tusaalaha ayaa ah in shirkadaha sida Oppo ama Huawei, in kasta oo aysan haysan kobaca warbaahinta Xiaomi, ay aad ugu badan yihiin suuqyo kala duwan oo ay u oggolaadaan naftooda raaxada ay ku kafaala qaadaan dhacdooyinka isboorti ee waaweyn ee muhiimka u ah caalamiga, haddii Xiaomi wax badan iibiso ... sidee bay u adag tahay inaan ku aragno xayeysiintiisa warbaahinta waaweyn sida telefishanka ama wargeysyada? Way fududahay, saamaynta ayaa had iyo jeer ka jaban doonta.
Mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu weynaa ee sanadkii hore ka soo gaadhay suuqa saamiyada ayaa ahaa Xiaomi. Waxay lumineysaa wax ka badan 50% qiimaheeda sidoo kalena ma iibineyso sida ugu muuqata. Gudaha Isbaanishka, GFK wuxuu diiradda saaray shirkadda soo gudbisa saamiga suuqa ee aysan runti ku lahayn iyada oo loo marayo qeybiyeyaasha gudaha ... pic.twitter.com/BszCtCqmEY
- JaviZone (@JavierSanz) July 8, 2019
Jacaylka shuruud la’aanta ah ee ay ku dhawaaqday kumanaankiisa adeegsade ee ay u qaybiyeen barnaamiyada ugu afka dheer ee Isbaanishka ku hadla (ForoCoches halkaas oo ay Xiaomi ku dhowdahay diin ama HTCManía) iyaga ayaa runtii ka dhigaya kuwo buuq badan laakiin ... Dad badan ma leeyihiin Xiaomi? Waa hagaag, xaqiiqadu waxay tahay in Spain haa, sida ku cad xogta ay heshay Statcounter, 13% iibka taleefannada gacanta ee casriga ah intii lagu jiray bishii Juun 2019 waxaa qaatay Xiaomi, oo ka dambeysa shirkadda Huawei oo aan u muuqan inay saameyn weyn ku yeelatay diidmada qayaxan ee Trump oo sida muuqata ka dambeysa hoggaamiyeyaasha ma guurtada ah, Apple iyo Samsung.
Isbarbardhiga sare ee wadamada kale ee adduunka ugu horreeya
In Apple ay hogaamineyso iibka wadamada leh dhaqaalaha ugu fiican gaar ahaan Anglo-Saxons waa wax aanan u imaan doonin inaan maanta halkan kuugu sheegno, wixii ka baxsan xogta falanqeyntu tuureyso, isla marka aad ku jirtay Boqortooyada Ingiriiska, Switzerland, Norway ama Mareykanka ayaa durbadiiba ogaaday in, si kastaba ha noqotee, waxa macquul ah ay tahay in Xiaomi uu xoogaa joogay dalalkan, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo in sumadda ay dukaamo ka furtay dalal ay ka mid yihiin Spain iyo Talyaaniga, xubnaha Midowga. Reer Yurub. Hagaag, arrimuhu way ka fog yihiin inay isku xirnaadaan oo waligood ma joogsanayaan inay naga yaabaan mar kale, kuwani waa xogta iibka Xiaomi ee waddamada waaweyn ee Yurub iyo Ameerika:
Norway: 1,6%, oo kaliya ayaa ka horreeya noocyada sida Motorola
Boqortooyada Ingiriiska: +/- 1%, oo ka dambeeya Motorola iyo shirkad wadaag ah “noocyo kale”
Mareykanka ka yimid Mareykanka: +/- 1%, ee shirkado isku mid ah «noocyada kale» ee ka dambeeya Motorola iyo LG
Kanada: +/- 1%, shirkado kale oo sumcadeed isku duuban
Francia (waddanka deriska la ah Spain iyo Talyaaniga): 3,06%, waxaa ka dambeeya Samsung, Apple iyo Huawei
Germany: 1,82% suuqa, ka dambeeya xitaa Sony
Talyaaniga: Wadanka ay Xiaomi ku leedahay dukaamo jireed, 3,09% iibka
Iswiidhan: +/- 1%, ka dambeeya Motorola, OnePlus (Oppo) iyo Sony
Natiijadu way cadahay, wadamada ugu waaweyn ee America iyo Yurub, Xiaomi waa sumad joogitaankeedu ku dhow yahay markhaati, taas oo ka duwan 13% suuqa ay ku leeyihiin Spain. Xaqiiqdii, Jarmalka, Talyaaniga iyo Faransiiska xitaa Apple ma aha hoggaamiyaha iibka, sidaas darteed Nidaamka Howlgalku uma muuqdo sabab qasab ah, isagoo ku dhawaaqaya inuu yahay hoggaamiye cad oo tirakoobka Android ah. Haddana waxaan mar kale su'aal ka keenaynaa, Haddii gudaha Isbaanishka safafka MiFans ka hor furitaanka Mi Store ay aad u dheer yihiin, maxay u tahay sumad aan inta badan la aqoon adduunka intiisa kale?
Marka ... xaggee Xiaomi runtii ku guuleysataa?
Si loo yiraahdo Xiaomi ma iibineyso waxay noqon doontaa been, shirkadda Shiinaha waxay wax badan ku iibisaa suuqyo gaar ah halkaasoo ay ka haystaan ​​oggolaanshaha dadweynaha. Sidaan soo sheegnay, Spain waxay leeyihiin 13,89% suuqa, kaliya waxay ka dambeeyaan Huawei, oo leh 19,96% suuqa, waxaa ku xiga Apple oo leh 21,71% oo hogaaminaya, sida had iyo jeer Spain, Samsung oo leh 27,72% wadarta iibka inta lagu jiro bisha Juun 2019. Xaqiiqdii, hadda Xiaomi waa kan afraad ee liiska noocyada iibiya kuwa ugu badan, laakiin si aad ah ka fog Samsung iyo Apple (31,98% iyo 22,04% siday u kala horreeyaan), iyo xoogaa ka fog Huawei oo leh 9,04%.
Hindiya: 22,19% suuqa Xiaomi, oo ku xiran Samsung
Spain: 13,89% iibka
Bulgaariya: 5% iibka
Shiinaha: Qiyaastii 9% iibka ka dambeeya Apple (+ 20%), Oppo (+ 20%) iyo Huawei.
Waxaa jira wax joogto ah seddex nooc: Samsung, Apple iyo Huawei waxay joogaan dhammaan suuqyada afarta boos ee ugu horreeya, xaalad kasta ha noqotee. Si kastaba ha noqotee, Xiaomi waxay bixisaa tirooyin aan caadi ahayn, iyadoo joogitaan aad u muhiim ah ku leh waddamada qaarkood, lagana yaabo in aan laga aqoon dalalka kale ee xadka la leh kor ku xusan. Sidee u jiri karaa faraq aad u badan? Waxaan qiyaasayaa in tani ay tahay sababta saxda ah in maalgashadayaashu aysan wax badan sharad ka gelin Xiaomi.
Haddana si muuqata ayey u qurxiyaan
Xaqiiq ayaa ku jirta waxaas oo dhan iyo kuweena isku dayay alaabooyin badan oo Xiaomi ah, laga bilaabo jijimooyin iyo saacado ilaa taleefannada casriga ah, waa ogyihiin, Xiaomi waxay soo bandhigeysaa sicirro ku jira heerar tayo sare leh, aad u badan, in ku dhowaad dhammaan alaabteeda (kamaradaha, baytariyada, taleefannada, nalalka ...) cidda ay toos ula tartamaan ee isla qiimaha ay tahay mid si cad u liidata, Taasina waxay u qalantaa sacab aad u weyn, maxaa yeelay Xiaomi caadi ahaan tusaalaha ayaa ka run noqday: Wanaag, fiican oo jaban. Waxaad ku arki kartaa dhammaan xogta loo isticmaalay qodobkan midkan LINK.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Xiaomi, sumaddaas oo ku guuleysata Isbaanishka oo si xun ugu fashilantay adduunka koowaad
Apple waxay bilaabi kartaa 4 nooc oo iPhone kala duwan ah sanadka 2020
Ikea waxay cusbooneysiineysaa noocyada nalalka TRADFRI ee la jaan qaada HomeKit